कति हुनुपर्छ उमेर अनुसारको शारिरीक तौल, थाहा पाइराखौ !
HomeNew Updareकति हुनुपर्छ उमेर अनुसारको शारिरीक तौल, थाहा पाइराखौ !
काठमाण्डौ । चिकित्सकीय दुनियामा साधारणत: उमेर अनुसार तौल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । उदाहरणको लागि कुनै महिला गर्भवती छन् भने उनको पेटमा बढ्दै गरेको बच्चा हप्ता अनुसार कति बिकास भईरहेको छ हेर्ने गरिन्छ, जब बच्चा जन्मन्छ तब पनि बच्चा कति महिनामा कति तौलको भयो र तौल अनुसार कति स्वस्थ छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै यति तौलको जन्मियो भन्ने रिपोर्ट दिने गरिन्छ । त्यसो त धेरै किलो तौलको बच्चालाई जन्म दिनेलाई पुरस्कृत समेत गर्ने चलन छ ।
बिशेषगरि जन्मदादेखि १८ बर्षसम्मको मानिसमा सारीरिक तौलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले यहाँ कुन उमेरमा औशत कति तौल हुँदा सरिरलाई राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास भएको छ ।
मानिसको उमेर अनुसार ४० बर्षदेखि ६० बर्षसम्मको उमेरमा पनि स्थिर तौल हुनुपर्छ । तर त्यसपछि भने तौल क्रमश घट्दै जान्छ । बुढेसकालमा पनि नियमित ब्यायाम र खानपानमा ध्यान दिने हो भने स्वस्थ भइन्छ । तर उमेर अनुसार रोगसँग लड्ने शक्ति र सारीरिक शक्तिमा समेत ह्रास आउने हुँदा स्वभाविक रुपमा तौल घट्दै जान्छ । –
Previous articleनववर्ष २०७९ मा चम्किँदै छ यी राशिको भाग्य, तपाइको कस्तो छ ?
Next articleथप १२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, मृत्यु शून्य